How'd it happen and more reports?: ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ မြန်မာ အိမ်ခြံမြေ ရွှေခေတ်လို့တောင်ပြောရမလားဘဲ?
၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ မြန်မာ အိမ်ခြံမြေ ရွှေခေတ်လို့တောင်ပြောရမလားဘဲ?
၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ မြန်မာအိမ်ခြံမြေ ရွှေခေတ်လို့တောင်ပြောရမလားဘဲ? ဈေးကွက်တောင်းဆိုမှုများလွန်း တာကြောင့် ရန်ကုန်ရှိ ခေတ်မှီရုံးခန်းဈေးတွေ စကာင်္ပူကရုံးခန်းတွေ ထက်တောင် ဈေးကျော်တက်သွား ပါပြီ၊ ဘာလို လုပ်ငန်းရှင်တွေ အမြတ်ရအောင်လုပ်နေကျလဲမသိ!
ပြည်ပ အော်ဒါခွဲတမ်း အနည်းငယ်ဘဲရနေကျတဲ့ အမိမြေက လက်ရှိ အထည်စက်ရုံတွေတောင် ဆက်လက်ရပ်တည်ရင် အတော်ကိုကျိုးစားနေရတဲ့ အခြေနေကို ရောက်နေတဲ့ အချိန်တွေပါ
ဒါတောင် ဘယ်စက်မှုဇုံတွေကို နိုင်ငံတကာက အလုံးအရင်းနှင့်လာရောက်ရင်နှီးမြှပ်နှံတွေ နှင့် အလုပ်ဖြစ်လောက်အောင် ဘယ်နိုင်ငံမှ အလုံအရင်းနှင့်လျင်မြန်၊ကောင်းမွန်စွာ ၀င်ရောက်မလာ ကျသေးပါဘူး၊ နိုင်ငံတကာ နာမည်ကြီးတံဆိပ်တချို့တာ လက်ဦးမှုအရ ၀င်ရောက်လာတာဘဲ ရှိပါသေးတယ်၊ အပြောင်းအလဲမြန်တတ်တဲ့ မြန်မာဥပဒေကို ကြောက်ကျလွန်းလို့ပါ။
အဓိက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အ၀မပေးနိုင်သရွှေ့ ဘယ်စက်မှုဇုန်တွေ မှ အောင်မြင်ကျလိမ့် မယ်မထင်ပါဘူးလို့၊ ဒီလိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကို ၀င်ရောက်နိုင်ဖို့ ခေတ်မှီတဲ့ နည်းပညာတွေနှင့် နည်းစနစ်လေးတွေကျွှမ်းကျင်တဲ့ ၀န်ထမ်းလေးတွေ မွှေးထုတ်နိုင်ဖို့ နှစ် အတော်ကြာအချိန် ပေးရအုံးမှာပါ၊
အမိမြေက သဘာဝ ဘယံဇာတကလွဲပြီး ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့ အများပြည်သူလူထုတွေ မျှော်လင့်တလို ၀ုန်းကနဲ ခုချက်ချင်း တိုးတက်လာအောင်လုပ်လို့ရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး၊ နှစ်ရှည်ရေရှည် စီမံကိန်းတွေ မှန်ကန်စွာချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှ ရမှာပါ၊ နှစ် ၆၀လုံး နောက်ကျကျန်ခဲ့တာကို လျင်မြန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အတတ်ပညာရှင်ပေါင်းများစွာ ကုိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ နိုင်ငံတော်အတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အလွန်ကို မလွယ်လှတဲ့ စီမံကိန်းကြီးတခုပါဘဲ မဟုတ်ပါ ဘူးလားချင်ဗျ...
February 2014 Yangon Real Estate Market Summary from Myanmar-Property
၂၀၁၂ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ခုနှစ်ဈေးကွက် မြန်မာအိမ်ခြံမြေဈေးကွက် တွေကို စာတမ်းပြုစုထားကို နှိုင်းယှဉ်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... ကြည့်လိုက်ကျပါအုံး...
Yangon Property Markey Report H1 2012 from Myanmar-Property
Posted by Ko Nge at Friday, September 26, 2014